Ndinotarisa sei Amazon mairi uye chii chakutengesa tracker tool iwe unogona kukurudzira?
Nhasi, nyika yemazuva ano yeWebhu Retailing inonyanya kurwisana nebhizinesi rekutumira mabhizimisi ecommerce. Vazhinji vevatengesi iko zvino vakasununguka kuwana zvigadzirwa zvavo zvinorondedzerwa kunyange pasina kushandisa mabhizimusi avo eIndaneti. Asi kazhinji vadzidzisi vezvemabhizimisi vari kukundikana kubva pasi, kunyanya nekuda kwekushaya kwekukwikwidza kunzwisisika kunonyanya kudiwa kuburikidza nekutanga kwekutanga-kutanga-nguva kwemaitiro avo. Uye nzvimbo yakadaro yakakurumbira uye yakawanda pamusika wemakambani seAmazon haisi izvozvi kune mutemo uyu unofadza chaizvo. Saka, pasi apa ndichaenda kukuratidzai varume sarudzo yakanaka yeiyo Amazon yakagadzirirwa sales tracker tools uye mamwe mhando dze software inobatsira iyo inogona kuva yakanakisisa yakakwana yekutanga yako pabasa rako rakabudirira-kutumira mabhizimisi.
Inonzwika zvakashata, ndinofanira kubvuma. Asi iyi Amazon inotengesa tracker tool inonyanya kubatsira mubatsiri webunhare, kunyanya kana iri kuuya kumutengo. CamelCamelCamel inogona kukutumira maziso akashandurwa (zvichida kuburikidza ne-email, kana Twitter) pane chero kuchinja kwekutengeswa kwaunoda kuti urambe uchiona, somuenzaniso kana mutengo wechigadzirwa iwe iye zvino uri kutarisa unotanga kukwira, kana zvimwewo, kana uchinge wadonhedzwa pasi . Kuvhara mamiriyoni gumi nemamiriyoni makumi mana nemasere muAmerica, mutengesi uyu wekutengesa unogona kukupawo iyo chaiyo inhoroondo inoratidzirwa nenzira yemabhadharo emitengo inoshandiswa. Iwe unogonawo kuedza shanduro yewebhu yeWebruti kuti ubatsirwe kubva kune imwe nzira yakanakisisa yekutsvaga mutengo.
Yechipiri inosanganisira Amazon sales tracker tool iyo inonyanya kukoshesa pamatengo, Keepa inopa rubatsiro rwepasi pose runosvika mumatunhu ekudzikisa zvakadarika munyika 11 dzakasiyana. Kana ndiri ini, inogona kuva sarudzo yako yakakwana kana iri kuuya pakutarisa mabhuku emiganhu yematengo, kuchenjerera pane ikozvino kuwanika uye kuchinja mumatengo, kuenzanisa chero matengo ematengo uye kutarisa zvinhu zvakanyanya kuitika kuAmazon. Izvi zvinotaurira pachako, saka zvakakosha kushandisa kana kuti zvishoma nekuedza.
SellerLogic zvakare chinhu chikuru kuti zviwedzere kuwedzerwa ku Amazon yako tracker toolkit. Kufunga kuti kazhinji kacho kunyange vatengesi vadzidzisi vanogona kutarisa zvinonyanya kukoshesa kutengesa muzvinhu zvekutengesa. Kana zvasvika pakuratidza mararamiro ane utano, kuti ave akanyatsojeka. Zvinotorwa nehuwandu, urongwa uhwu hunoita kuti zvikwanisike kugadzirisa mitengo yako pasi pemigwagwa mina yakasiyana -Kutenga Bhokisi (mutengo wekufungidzira unotarisirwa kutengesa chigadzirwa chako kuBhuku raunoda kutenga Bhokisi), Chigaro (kukosha kunoda kuwana chigadzirwa chako chakaiswa mumigumisiro yekutsvaga ne chinzvimbo chaiyo), Kutengesa (mutengo wepamusoro yakakwana kuti uwedzere kutengesa kwako), Match (mutengo iwoyo unoenderana nevashori vako). Zvechokwadi, kune dzimwe nzira dzakawanda dzekutengesa kuAmazon, pamwe nemakumi ezviuru ezvimwe zvakasiyana-siyana zveshandisi zvinoshandisa keyword kutsvakurudza, kukwikwidzana nekuongorora, kushandiswa kwekunyoresa, nezvimwewo. Vakawanda vavo vanowanikwa mukusununguka, saka musazvirere pamwe neAmerica pricing chete - famba mberi uye urambe uchiongorora mikana iri nani pamusoro apo Source .